Torolàlana amin'ny fandrefesana ny fahombiazan'ny varotra B2B | Martech Zone
Orinasa maro no miady mafy amin'ny famaritana sy fampivelarana mari-pamantarana marimaritra iraisana amin'ny ezak'izy ireo amin'ny asa aman-draharaha. Ity infographic avy amin'ny vahaolana g2m ity dia fampifangaroana ireo mari-pahaizana momba ny varotra B2B izay nohazavaina kokoa tamin'izy ireo Fandrefesana ny ebook ROI Marketing.
Ny fomba fanatonana SMART amin'ny Marketing Analytics
SMART dia fanafohezana ny fomba mahazatra amin'ny ezaka marketing rehetra:
Smifidy Inona no refesina
Amamantatra ireo zavatra hita fototra
Ny sehatry ny fantsom-panovana fivarotana B2B
Miaraka amin'ny fisian'ny marketing omni-channel, saika ny mpitsidika rehetra tonga eo amin'ny tranokalanao dia tonga, mandray anjara ary miova amin'ny làlana hafa. Ny fantsom-pivarotana nentim-paharazana sy marketing tahiry dia tsy mihatra amin'ny sehatra micro intsony, fa amin'ny ambaratonga makro kosa ny Analytics ary ny metrika amin'ny fanaraha-maso ny fahombiazan'ny fitambarana dia mbola mety. Ny dingana telo dia ny TOFU, MOFU ary BOFU - izao no famaritana ny tsirairay:
tofu (Top of Funnel) - Ireo dia mpitsidika ny ezaky ny varotrao izay matetika eo amin'ny sehatry ny fikarohana ny tsingerin'ny fividianana. Ny tanjona ara-barotra eto dia ny hahazoana antoka fa hita ny marikao, ny vokatrao na ny serivisinao izay misy ny vinavinam-pikarohana… amin'ny fikarohana, sosialy, tranonkala famerenana, lahatahiry ary tranokala indostrialy mifandraika amin'izany.
MOFU (Afovoan'ny funnel) - Ireo dia mpividy ho an'ny marika, vokatra na serivisinao. Tsy mbola amidy izy ireo - saingy efa nahita anao tamin'ny fikarohana izy ireo ary mety hanapa-kevitra ny hifandray aminao bebe kokoa izy ireo. Ireto dia mpitsidika izay tianao hampihatra antso-to-hetsika sy pejy fandraisana tsara mba hampandehanana azy ireo hidina lalina kokoa amin'ny tsingerin'ny fividianana. Ny marketing amin'ny mailaka no ivon'ity sehatra ity.
BOFU (Ambany fantsona) - Mpividy ireto. Vonona ny hividy izy ireo, manana teti-bola ary fantatr'izy ireo fa manana ny vokatra sy serivisy ianao hanampiana amin'ny famahana ny olan'izy ireo. Ity dingana ity dia manakiana amin'ny fanatsaranao ny fiovam-po sy ny fidiranao amin'ny varotra. Eo koa no ahafahan'ny teknolojia fampandehanana ny varotra manampy amin'ny fanodinana sy fanatsarana ny fiovam-ponao.
Ny mari-pamantarana ny paikadin'ny varotra fidirana B2B
Misy metrika azo ampiharina amin'ny dingana rehetra amin'ny tetikady marketing isaky ny teboka ao amin'ny fantsom-panovana.
Ambonin'ny Funnel - Fifamoivoizana amin'ny fikarohana voajanahary, laharam-pahamehana keyword, fifamoivoizana referral, fivezivezena karama karama, karama fikarohana karama, karama fikarohana isan-tsindry, fifamoivoizana mivantana (izay matetika misy ny fifamoivoizana amin'ny app sosialy), ary ny fifamoivoizana amin'ny haino aman-jery sosialy sy karama.
Afovoan'ny funnel - Jereo raha tsindrio ny antso-to-hetsika, jereo ny tsindrio ny pejy fitaterana ary kitiho ny tahan'ny fandefasana amin'ny pejy fitobiana dia hanome anao angona hanatsarana sy hizaha toetra vaovao, fizarana ary atiny vaovao handroahana ny fandefasana.
Fantsona ambany - Ny habetsahan'ny firaka, ny fitarihana mari-pahaizana amin'ny varotra, ny fitarihana ny kalitaon'ny varotra, ny tahan'ny tolo-kevitra, ny tolotra manakaiky ny tahan'ny fifandanjana ary ny tahan'ny fiovam-po ankapobeny dia refesina amin'ity dingana ity sy amin'ny ambaratonga rehetra.
Tags: Analyticsb2b analyseb2b marketingbofuambany fantsonaantso ho amin'ny hetsikatsindrio ny tahan'ny fiovam-pokitiho raha hiova tahan'nytahan'ny click-throughtaham-panovanatahan'ny fiovam-poFNTfifamoivoizana mivantanaDirectoriesDownloadspejy pejyfiraka bokymitarika amin'ny tahan'ny tolo-kevitrafitarihana mahafeno fepetra marketingafovoan'ny fantsonamofufilaharana keyword keywordFifamoivoizana amin'ny fikarohana voajanaharyfifamoivoizana amin'ny haino aman-jery sosialykarama fikarohanakarama fikarohana karama isaky ny kitihofivezivezena mitady karamafivezivezena amin'ny haino aman-jery sosialytolo-kevitra hanakatona ny tahan'nyfampitana fifamoivoizananisoratra anaranatranonkala famerenanavarotra mitarika mahaySearch MarketingSocial Media Marketingtofuambony fantsonajereo raha tsindrio ny tahan'ny
27 Novambra 2014 à 10:19
Salama Doug - Misaotra an'ity! Vao manomboka izahay, manampy ireo orinasa madinika hitantana tsara kokoa ny varotra nomerika. Maro no tototry ny tetika sy paikady isan-karazany. Inona no holazainao fa metrika manan-danja indrindra ho an'ny orinasa madinika mba handrefesana raha mifandraika amin'ny marketing inbound? Misy fomba tena hanatsorana izany ho an'ny olona ve? Misaotra!